दिनदहाडै एकै परिवारका ४ जनाको मृ’त्यु, पुरा गाउ नै शोकमा !! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /News/दिनदहाडै एकै परिवारका ४ जनाको मृ’त्यु, पुरा गाउ नै शोकमा !!
कालिकोटको तिलागुफा नगरपालिका–१ नाग्मा बजारमा पहिरोले पुरेर एकै परिवारको ४ जनाको मृत्यु भएको छ । घटनास्थल बाट तिलागुफा नगरपालिका–३ बस्ने वर्ष १३ का अर्जुन हमाल र जुम्ला हिमा गाउँपालिका घर भएकी ३५ वर्षीया पुन्या शाहीको जिवितै उद्धार गरिएको छ ।
आइबार आएको पहिरोमा परेर शुभकालिका गाउँपालिका घर भएका ४० वर्षीया प्रयास शाही, उनको ५ वर्षीय छोरा निराजन शाही शाही, ७ वर्षीया छोरी हिमा शाही र दुई महिनाको अर्को छोरा अकल शाहीको मृत्यु भएको छ । पहिरोले ५ घर पुरेको र घटनास्थलबाट २ जनालाई जिवितै उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालिकोटका प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) श्यामबावु ओलियाले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनीहरुलाई उपचारका लागी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा पठाइएको छ । पहिरोले मासु पसल र किराना पसल पुरेको छ । जुम्लाबाट खटिएका ३२ जना उद्धारकर्मी घट्नास्थलमा उद्धारका लागि खटिएका छन् ।
यो पनि, दार्शनिकहरु निद्रा मृत्युको छोटो रुप भएको मान्छन्। बि हान उठ्दा आँखा खोल्नु मानिसको नयाँ जन्मको रुपमा लि न्छन्। वास्तु र ज्योतिष विज्ञानले जीवनको हरेक क्षण को सुक्ष्मरुपमा अवलोकन गर्ने गर्छ । दर्शनमा विहानको समय र रात्री समयमा अलग अलग नियम बनाएका छन्। राति सुत्नेसमयमा सिरानीमा यी ८ चीजहरु राख्दा वास्तु दोष हुने खतरा हुन्छ । यसको प्रभाव जीवनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा हुन्छ ।राति सुत्नेबेला सिरानीमा जुत्ता ,चप्पल जस्ता चीजहरु राख्नु हुँदैन । वास्तुका अनुसार यी चीजले मानिसको जीवनमा असफल बनाउनुका साथै नका रात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । यसले मस्तिष्कमा नकारात्मक उर्जा प्रवाह गर्ने गर्छ । ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
सुत्ने बेला बेड राम्रोसँग सफा गर्नुपर्छ । बेडमा भएका चीज हरु हटाएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कतिको त बेडमै बसेर भोजन गर्ने बानी हुन्छ । त्यतिबेला उनीहरुले नुन लगाय त का अन्य चीजहरु बेडमै यतिकै छोड्ने गर्छन् । वास्तुका अनुसार सिरानीको छेउमा नुन आदी पदार्थहरु पर्दा परिवा रका सदस्यहरुबीचमा कलह उत्पन्न हुने खतरा बढ्छ । बेडमुनिको खाली ठाउँ सदुपयोग गर्ने उदेश्यले धेरैले सामा नहरु राख्ने गर्छन् । तर बेडमुनि तेलजन्य पदार्थ कहिले पनि राख्नु हुँदैन । बिशेषगरी बेडको सिरानी मुनि तेल रा ख्दा यसले मानिसको जीवनका बाटो कठीन बनाइदिने र मेहनत अनुसार फल प्राप्त नहुने हुनसक्छ ।
फलामको सिक्री र डोरी दैनिक उपभोग्य सामान भित्र परे पनि यी चीजहरु बेडको नजिकै राख्नु हुँदैन । यसले जी वनमा अशुभ निम्त्याउँछ । यसले जीवनमा लगातार बाधा उत्पन्न हुने खतरा बढ्छ ।सुत्ने बेडमुनि ओखल राख्नुहुँदैन । यसले पारिवारीक सम्बन्धमा तनाव आउनसक्छ । यसले गर्दा सकारात्मक कार्यमा मन जानुको सट्टा नकारात्मक कार्यमा ध्यान जाने खतरा बढ्छ ।सिरानीको छेउमा कुचो राख्दा यसले नकारात्मक प्रभाव पार्ने गर्छ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार सिरानीको छेउमा कु चो राख्दा यसले जीवनमा दुर्भाग्यको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।सिरानी पर्ने ठाउँमा कपडा सुकाउने गर्नुहुँदैन । यसले सफ लतामा बाधा उत्पन्न गराउँछ।बेडको सिरानीमा मोबाइल लगायत अन्य इलेक्ट्रोनिक्स सामानहरु राख्नुहुँदैन । यसले गम्भीर दुष्परिणाम आउने खतरा बढ्छ। ** भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
बारामा एक जना पत्रकारमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, सम्पर्कका अन्य ब्यक्तिको खोजी गरिदै
इण्डीयाले नाकाबन्दी लगाउँने आशंकाकै विच चिनले दियो खुशिको खबर